Gịnị ka ụcha pọpụlị pụtara | Agba agba - Ihe Nnọchianya Pụtara
Nọmba Mmụọ Ozi
Ihe Ịrịba Ama Zodiac
Gịnị Ka Agba Ocha Pụtara
Gịnị Ka Agba Purple Pụtara
Oh, Purple. Agba nke aristocracy, opulence, na okpueze Chakra. Na ọnụ ụzọ miri emi nke agba odo odo gị, ihe omimi kacha ochie na nkwukọrịta sitere na agba gburugburu Chineke, na-eche ka anyị hụ ma ghọta. Kedu ihe ụcha Purple pụtara gị? Kedu ihe kpatara Purple ji duzie gị na Astro horoscope nke ụbọchị? Kedu ihe ị na-achọ? Kedu ihe na-achọ gị?
Isiokwu Ndị Dị na Ya Agba
Key Symbols Symbol
Okooko Osisi Purple
Okwu banyere Agba Purple
Laghachi niile Agba agba
Laghachi na Akara niile & Ihe ọ pụtara
Agba odo Purple & Symbolism
Ike odo odo! Ihe nnọchianya na nzube nke odo odo jikọtara ya na ọdịdị ime mmụọ anyị na ike iche echiche n'ime igbe. Purple bụ agba nke ezigbo arụmụka na ọ na-ada ụda nke vibrations nke Onye Kachasị Elu ma jikọta ya na Chi.
Na wiil agba, Purple na-agwakọta uhie na acha anụnụ anụnụ, yabụ ọkụ ya na mmiri ya, agụụ ya na mmetụta ya, omume na echiche ya, ike ya na ịkwụwa aka ọtọ niile. Ezigbo Purple na-ejikọ njikọ ya na ụwa nkịtị na mkpụrụ obi anyị, nke na-eme ka ọ bụrụ ụcha magburu onwe ya iji gosipụta nkwekọ na mgbanwe.
leo nwanyị na nwoke nwere ịhụnanya hụrụ ndakọrịta
Lightworkers ji Purple kpọrọ ihe maka ikike ọ ga-eji mee ka ị mata banyere uche. Nwere ike iburu Nkume dị nsọ Purple na kristal dị ka Amethyst, Purpurite, Purple Fluorite, Lepidolite na Charoite nwere ike iji maka ebumnuche a dị ka ọsịsọ, isi ihe anwansi ma ọ bụ ntụgharị uche. Ihe dị mma banyere Purple bụ na ị nwere ike ịchọpụta mgbe ịmụrụ anya onwe gị mgbe ị ka dị n'eziokwu.
Purple bụ agba nke nrọ, ọchịchọ na whimsy. Ọ na - akwalite udo nke uche ma na - enyere ndị chọrọ ime ka 'ụbụrụ na-arụsi ọrụ ike' zukọta ma gbakọta uche. Purple na-enye ịhụnanya n'ịhụnanya, obiọma na nghọta. Ọ na - ewepụta ihe ọhụụ, na - eme ka ọ bụrụ agba a na - ejikọtakarị ya na ndị okike na ndị ọkachamara.
Na egwurugwu nke hues, Purple bụ onye na-enye onyinye ma na-eme nke ọma. Mgbe ụwa kụrụ gị ike, Purple na-ebuli gị elu, na-enye amamihe dị omimi na ohere ịmalite ọhụụ. Enwere ebumnuche na Purple na nghọta onwe onye dị jụụ nke sụgharịrị ịbụ ọrụ ndu.
Na okike Purple dị obere, na-enye ya mkpa pụrụ iche na ọdịbendị dị iche iche n'akụkọ ihe mere eme. N'oge ndị Rom uwe ndị na-acha odo odo na-adabara naanị Emperor ma ọ bụ ndị bara ọgaranya nke ukwuu n'ihi na ọ bụ ọrụ siri ike ịme. Nke a bụ eziokwu na Mediterranean na Far East. Yabụ, akara akara Purple gara n'ihu na ndị isi, ndị ọchịchị na ọnọdụ nke ike. N'ihe ngosi na-adịghị mma, ụfọdụ ọdịbendị hụrụ Purple dị ka agba nke ọnwụ gụnyere Italy na Brazil.
Na America, Purple ghọrọ agba nke obi ike (ya bụ, Purple Heart).
Sayensị na-ekpughe na Purple dị mkpụmkpụ nke ịdị n'otu ebili mmiri dị ka ụzarị ọkụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara mmadụ ji jikọta ya na anwansi na ihe omimi, ọbụnadị na ọkwa dị elu.
N'ikpeazụ, Purple bụ agba nke okpueze Chakra - ike wheel nke maara ihe gbasara mmụọ na njikọ kpọmkwem na isi iyi Chineke.
Ihe Agba Gị Na-amasị Gị Na-ekwu Banyere Gị
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Purple ma tụlee ya ọkacha mmasị gị na agba ya pụtara na ọ ga-abụ na ị nwere nghọta, obiọma, ọmịiko na iguzosi ike n'ihe. Asusu ihunanya gi bu oru, na-ebute mkpa nke ndi ozo karie nke gi. Ndị mmadụ mara nke a gbasara gị na ụfọdụ ga - agba mbọ iriju ike gị niile.
Ọ bụrụ na Purple bụ àgwà gị, ọ nwere ike inye aka izere vampires nke uche, ego, ma ọ bụ nke anụ ahụ dị ka ihe otiti ahụ.
Ndị na-acha odo odo na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ ma na-enwe mmerụ dị mfe n'ihi na ha anaghị aghọta obi ọjọọ. Nke a sitere na mkpụrụ obi dị nwayọọ nke hụrụ nnwere onwe na udo. Ọgba aghara abụghị ike gị.
Stagewa nke uwa nwere mmasị n’onwe gị. Have nwere magnetism ndọda a, agbanyeghị na ịnọ jụụ. Are dịtụ ka 'otu anụ ọhịa wolf' n'ihi na enwere ọtụtụ ọrụ ị ga - ahọrọ ịme naanị gị. Na oghere nke aka gi ma debe okwu eclectic, achikota ya nke oma.
Ndị na-acha odo odo bụ ndị na-arọ nrọ - ndị nwere mmasị na-ahọrọ ịhụ ụwa n'ụzọ nke gị, na-enweghị ịkpọasị, ụjọ na njikwa. Nke ahụ bụ otu ihe egwu maka mkpụrụ obi Purple. Ọ na-efu na ụwa efu ọbụlagodi mgbe nyocha ọ bụla ga-enye aka.
Personalitydị àgwà nke Purple na-ekwu maka mmetụta sitere n'ike mmụọ nsọ na ndị mmadụ. Changes naghị adịkarị mfe ịgbanwe site na mgbanwe, ọbụnadị ndị na-adịghị mma. O nwere ike ị gaghị achọ ya, mana ị nwere ike ijikwa ya nke ọma.
Ihe omuma nwere ike iwere Purple dị ka mkpụrụ obi ochie, nke a na-adọta n'ọmụmụ ihe gbasara mmụọ. Knowmara na ‘eziokwu’ dị n’ebe ahụ; isi ihe na-achọta ya. Omume a na-agbagwoju ndị ọzọ anya, yabụ ị nwere ike izochiri onwe gị ihe ị mụtara na-atụ ụjọ na enwere nghọtahie.
'Picktụtụ' ụbọchị na-ewute gị, dịka ihe ọ bụla nke yiri ka ọ na-akụ aka. N’uche gi, odighi ihe eji eme ka imomie mgbe ị nwere ike ime ihe ohuru, ihe ohuru na ihe itunanya. Echiche a bụ otu akụkụ nke ọchịchọ gị, ọ na-emekwa ka agụụ ihe onwunwe dị egwu na-agụ gị. Ọ na-enyekwa mkpụrụ obi gypsy nke chọrọ ịhụ ụwa ma nweta ya n'ụzọ zuru oke.
Akara Psychology: Purple
Ikwu okwu n'ozuzu Purple na-emetụta ihe omimi na ajụjụ ime mmụọ. Nke a bụ ihe mere eji eji Purple n'ọtụtụ ụka dị iche iche.
nwoke aries na bed na nwanyi scorpio
Agba nke Purple na-ejikwa ọganihu na ndu. Tụlee na ndị ndu sitere na Ndị Eze Ijipt ruo Queen Elizabeth II na-eyi uwe odo dịka akara nke ọkwa ha.
Ezigbo ndị mmadụ na-asọpụrụ Purple ma ọ bụ na-enweghị mmasị na agba a. Maka ndị hụrụ ya n'anya, ọ nwere ike gbaa ha ume, ime mmụọ, ịghọta ihe, mee ka mmadụ nwekwuo agụụ mmekọahụ, meekwa ka obi dị jụụ.
Purple na-ebelata ọgba aghara nke ụwa, na-akpọ sagacity ma na-anọchite anya achọghị ọdịmma onwe onye nanị. Ọ bụ ezigbo hue iji jikọta na mgbasa ozi maka ọrụ ebere, ma ọ bụ ụlọ maka nzukọ nzukọ mbọ mmadụ.
Purple bụ ụcha dị egwu iji nyere ndị mmadụ aka imeghere nnukwu mpaghara nke okike na echiche.
Agba odo odo:
bụ sagittarius dakọtara na leo
Jiri violet mee ka vibration frequencies dị na ememe ma ọ bụ na-atụgharị uche. Light Purple na-arụ ọrụ nke ọma na nwa dị n'ime na ihunanya. Dark Purple na-ekwu maka amara, nsọpụrụ na uche dị nkọ. Lavender na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ, Amethyst na-emepe ọnụ ụzọ dị omimi, piom bụ 'ọdịnala' ma bụrụkwa omenala.
Ndepụta Crystals Purple
Kristal crystals na nkume bụ staple na ike niile na-agwọ ọrịa na lightworker ‘ngwa ọrụ’. A na-amata kristal na nkume dị na mbara igwe iji mee ka ọ dị ọcha, dozie ma chebe. Agba agba odo na-emeghe ma na-eme ka mpaghara uche na nke auric dịkwuo elu ka onye na-agwọ ọrịa ma ọ bụ onye mmụọ nwere ike ịnụ ozi sitere na Mmụọ.
Achịcha Purple - nhazi, nkwukọrịta doro anya, akpịrịkpa nke ikpe ziri ezi.
Alexandrite - otutu mmadu, ezi uba, okpueze kachasi elu Chakra.
Amethyst - nchebe, ịdị ọcha, nkwukọrịta na chi.
Ametrine - nchekwube, na-ewepụ ihe mgbochi mmetụta uche, uche dị elu.
Charoite - itinye uche, na-ewepu adịghị mma, na-enyere aka na-akwado mmụta.
Fluorite - ilekwasị anya, ntụgharị uche, nchedo uche.
Quartz nke mmụọ - na-eweta nkwekọ na udo, ịhụnanya zuru ụwa ọnụ.
Sugilite - ihunanya ime mmụọ zuru oke, na-echebe pụọ na ezigbo obi ọjọọ na ajọ mbunobi.
Ndepụta Ifuru Purple
Pọpụl Crocus - nlọghachi, na-ebili ọzọ site na ntụ.
Iris Pris - chi nwanyi, intuition nke ndi nwanyi, ndi eze.
Lavender - ịdị jụụ, ùgwù, ịdị jụụ.
Lilac - ịhụnanya mbụ, ọcha, nnabata.
Achịcha Lily - eze, fleur de lis, amara.
Pọpụl Lotus - mysticism, Buddha, okwukwe.
Pọpụl Salvia - njikọ uche, amamihe, ogologo ndụ.
Violet oge ntoju ebe a kụrụ gị, na-adị ndụ ma na-eme nke ọma megide nsogbu.
'Purple na-eme m ihe ọhụrụ.'
Alice Walker - Agba odo
'Echere m na ọ na-ewute Chineke ma ọ bụrụ na ị na-eje ije site na-acha odo odo na a n'ọhịa ebe na-adịghị achọpụta ya. Ndị mmadụ chere na ime ihe na-atọ Chineke ụtọ bụ ihe niile gbasara Chineke. Mana onye nzuzu ọ bụla bi n'ụwa nwere ike ịhụ ya mgbe niile ka ọ na-agba mbọ ime anyị obi ụtọ. '
Astrope kwa ụbọchị
Abụ m akụkụ a hụrụ n'anya nke Eluigwe na Ala. Ejikọtara m na ihe niile. M na-enwe njikọ doro anya na Chi. Isi na Mmụọ dịịrị m oge niile. All na-agbaghara niile etoju. Serenity bu onyinye ebighi ebi m. - Okpueze Chakra Mantra
'Womenmụ nwanyị ndị America niile nwere imi na-acha odo odo na egbugbere ọnụ isi awọ, ihu ha dịkwa ọcha site na ntụ ntụ dị egwu. Aghọtara m na United States nwere ike ịbụ ọrụ m. '
'Bụrụ? Mauve dị pink nke na-achọ ịbụ odo odo.
'Nwanyị nwanyị ga-abụ nwanyị dị ka odo odo si acha odo odo.'
scorpio nwoke na taurus nwanyi ndakọrịta
ndepụta mbara igwe ndị dị na mbara igwe anyị
gịnị mere libras ji dọta akpị
gịnị mere scorpios ji adọrọ mmasị libras
ihe jikọtara ya na ọnwa nke june